KQ Factory Taxanaha - Shiinaha KQ Soosaarayaasha Taxanaha, Alaab-qeybiyeyaal
Raaxada shaqaaluhu maahan wax fudud. Daraasaduhu waxay si isdaba joog ah u muujiyeen in shaqaalaha kuwaas oo ah jir ahaan raaxo la'aan noqo mid mashquuliya una nugul khaladaadka.Tani waxay si gaar ah run u tahay xaaladaha raaxo darada daran, sida marka daalka kuleylka, istaroogga kuleylka iyo noocyada kale ee shaqo joojinta kuleylka.
12 FT HVLS Warshadda Warshadaha Taageerayaasha Qaboojinta
Tas-hiilaadka Saadka ayaa u baahan xawaare iyo kala-dheeri. Waxqabadka noocan ah iyo taraafikada ayaa dhaliya kuleylka cimilo kala duwan. Soosaarista kuleylkaani waa mid baahsan, gaar ahaan xagaaga kulul bilood marka tas-hiilaadka saadku ay leeyihiin meelo furan iyo furitaan kuleyl ku wareejinaya xarunta. Bakhaarada iyo tas-hiilaadka tasiilaadka ayaa kaa caawin kara kala qaybinta lakabka hawada iyo isku-darka lakabka kuleylka ee laga sameeyay saqafka. Isku darka hawada iyada oo loo marayo wareegga tan dusha sare wuxuu ka caawiyaa in si weyn loo yareeyo kuleylka loona baabi'iyo kuleylka ku urursan tas-hiilaad waaweyn.
16Ft HVLS Taageerayaasha Weyn Ee Iskuulka
Maanta Dugsiyada & Koleejyada jawiga fasalku wuxuu noqdaa buuq ama hawo yar hawo qaboojiyayaal ama yar yar taageerayaal buuq badan. Dhawaqan iyo mashquulinta ardayda inta ay wax baranayaan kana dhigaya kuwo aan ku raaxeysan karin barasho. Hawlgal aamusnaan ah, OPT HVLS Fan wuxuu ka dhigayaa jawiga fasalka mid aad u wanaagsan, taas arday kasta wuu maqli karaa wuxuuna xooga saari karaa barashada fasalka.
18FT HVLS KQ Taageerayaasha Hawo-warshadeynta Wanaagsan
Taageerayaasha OPT HVLS looma isticmaali karo oo keliya xagaaga qaboojinta iyo hawo-qaadashada, laakiin sidoo kale waxay ku faafiyaan hawo diirran oo kuleyliyaha.
20FT HVLS Taageerayaasha Hawada Hawada
OPT HVLS Qalabka badbaadada hawo-qaadista warshadaha saxaarada: daab kasta oo taageere ah waxaa lagu qalabeeyaa isku xidhka isku xidhka badbaadada nooca L si looga ilaaliyo daabku inuu ka yimaado qaybo kala duwan, gacantana usheeda dhexe caaryada waxaa loogu talagalay inay ka hortagto in jiiska wareega uu si lama filaan ah u siibto. Dhammaan qalabka wax lagu xiro waxaa lagu qalabeeyaa lowska is-qufulaya ee lidka ku ah iyo suufka ilkaha oo u eg….
24 FT Taageerayaasha Saqafka Dibadda
Bakhaarada iyo tas-hiilaadka guud ahaan hareeraha muuqaal ballaadhan oo laba jibbaaran oo ay ka buuxaan mashiinno
ery, dadka, iyo xitaa nalka kuleylka ee bixiya kuleylka. Meelahan waxaa laga yaabaa inay saameyn ku yeeshaan cimilada
aagagga, tayada hawada oo liidata, iyo kuleylka aan habboonayn, oo yareyn kara tamar darrida iyo
welwelka nabadgelyada ee maareeyayaasha.